Raysal Wasaaraha Soomaaliya oo Digniin u Jeediyay kooxaha Falalka Amaandari ka Wada Muqdisho
Home Somali News Raysal Wasaaraha Soomaaliya oo Digniin u Jeediyay kooxaha Falalka Amaandari ka Wada...
Raysal Wasaaraha Cabdi Faarax Shirdoon Saacid Ra’iisul Wasaaraha Soomaaliya ayaa isagoo digniin adag u jeedinayay dadka inta badan falalka amaandari ka wada dalka Soomaaliya waxa uu sheegay in burcadaasi lagu qaban doono gacan bir ah oo ka dabadag leh.
Ra’iisul Wasaaraha Soomaaliya Cabdi Faarax Shirdoon Saacid Ra’iisul Wasaaraha Soomaaliya waxa uu timaamay in dadka falalka amaandari ka wada Muqdisho ay doonayaan in ay iska horkeenaan ama ay isku diraan dadka shacabka ah iyo Mas’uuliyiinta dowlada Soomaaliya si markaasi ay kaga aamin baxaan,waxa uuna ku baaqay in dadkaasi baadi goobka loogu jiro gacanta lagu soo dhigo ay wajihi doonaan ciqaab adag.
“Dadka madaafiicda soo tuuraya waxa ay rabaan inay shacabka iyo Dowladda iska horkeenaan anaga marnaba taasi ma aqbalayno umana dulqaadaneyno”Ayuu yiri Saacid.
Waxa uu dhanka kale uu sheegay Rayalwasaaraha Soomaaliya si loogu guuleysto kooxahaasi loo baahan yahay in shacabka soomaaliyeed ee nabad doonka ah ay la shaqeyaan ciidamada amaanka ee har iyo habeen howlgalada ka wada Degmooyinka Muqdisho.
Hadalka Cabi Faarax Shirdoon ayaa imaanaya iyadoo mudooyinkii danbe ay sii kordhayeen falalka amaandari ee ka jira magaalada Muqdisho.